mitadyinjenierainformatikamalagasynymaorisiana [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/9/9cb3cdf2be375692a98992a41019f4ae.xhtml failed
Mitady injeniera informatika malagasy ny maorisiana...
Ireo atouts en an-tanan'ny Nosy Maorisy :
Zavatra roa anefa no sakana lehibe ho an'ny Nosy Maorisy :
27/05/2005 Mpanoratra : Heriniaina M.
Nipoitra tamin’ny gazety maro teto amintsika ny 25 mey 2005 ny fitadiavana injeniera informatika ho lasa mpitarika tetik’asa any Maurice, sy olona afaka hanoratra programa informatika.
Io dia nateraky ny tanjon’ny firenena Maorisiana ho lasa Cyber-ile. Ny tanjona amin’izany dia ny hampidarana vola mitentina 1 miliara USD any amin’ny taona 2008 any. Tsy te ho very anjara amin’ny tsena be’ny externalisation sy ny developpement logiciel no anton’io ezak’io.
No io ezaky ry zareo Maorisiana io dia olona 13.000 no ilaina hatramin’ny 2006 mba ho tonga 40.000 ireo miasa ami’ny sehatry ny Teknolojia Informatika. Ny olana ho an’dry zareo anefa dia tsy ampy ny olona eo aminy ka izany no mahatonga izao fitadiavana mpiasa aty madagasikara izao.
Ny fahasamihafan’ny ora amin’ireo firenen-dehibe (decalage Horaire)
Fifandraisana ‘fibre optique’ SAFE (South Africa Far East),
Fifandraisana ‘fibre optique’ SAT-3/WASC,
Karaman’ny mpiasa 200 à 400 €,
Fitenenana teny roa (Frantsay, Anglisy),
Ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola entin’i Inde.
Tsy ampy ny isan’olona (anton’ilay fitadiavana mpiasa aty Madagasikara),
Tsy fahampiana eo amin’ireo Certfications sy vidin’ny connexion.
Tsy azo adinoina koa ireo firenena ao Eropa Atsinana izay eo an’elanelan’i Azia sy Eropa Andrefana. Marihiko eto fa efa betsaka ireo orin’asa miasa amin’ny sehatra informatika no misorakatra amin’ireo firenena ao Eropa Atsinana ireo izay mambra ny fianakaviam-be Eropeana rahateo.
Lavidavitra ihany zalah’ ny backbone nasionalintsika. Ny tiako ho marihina moa izany dia efa voadinika sy voafakafaka tsara ny paika sy tetika hidirana amin’ny sehatry ny TIC raha ho an-dry zareo maorisiana. Ry zareo maorisiana moa dia nanokana faritra, na dia efa tery dia tery aza ny taniny, mba hipetrahan’ireo orin’asa hitsangana any aminy. Raha haka ohatra hafa aho na dia tsy mety loatra aza ny fampitoviana dia Chine koa dia efa manana ny ‘Silicon Valley’ ny ary ry zareo miaraka amin’ny Japon, Korea Atsimo dia ao ambadik’ilay tetik’asa lehibe atao hoe Asianux (GNU Linux) mba ialana amin’ny main-mise’ny orin’asa amerikana amin’ny sehatra informatika.
Ho an’izay liana amin’ny fandratoana any dia ity misy marika vitsivitsy ny amin’ireo karama* any :
Operateur de saisie 150-175
Agent / Tele-operateur bilingue 200-250
Superviseur centre d’appels/Technicien 350-400
Programmeurs HTML Technicien/Informaticien junior 400-500
Programmeur debutant/Informaticien junior 400-500
Programmeur/Informaticien/Infographiste/Admnistrateur reseaux 500-700
Chef de Projet 800-900
Manager à partir de 1,000
: Euro (€) no miasa eto
Ny orinasa SSII dia frantsay ny 50%.
Izay no masaka azo naroso. Betsaka no azo hanampiana na hanitsiana ny lahatsoratra, ka maniry antsika hitondra soso-kevitra hanatsarana...
mitadyinjenierainformatikamalagasynymaorisiana.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43